Accueil > Gazetin'ny nosy > Andranobe Antsirabe: Manjaka ny asan-dahalo
Andranobe Antsirabe: Manjaka ny asan-dahalo
Tsy fahandrim-pahalemana anatin’ny fijaliana sy tebiteby lava ny mponina ao amin’ny faritra avaratr’ Antsirabe indrindra fa ao Andranobe. Tsy mitsahatra ny iharan’ ny fanafihan-dahalo ity toerana ity izay ny omby no tena lasibatr’ ireo dahalo. . Omby miisa 10 indray mantsy no lasan’ ny dahalo ka dia velo-taraina ny mponina satria dia efa mila ho isan’ andro ny fangalaran’ izy ireo ny omby ao ambala. Voalaza fa tsy misy tahotra intsony mihintsy ireto mpanao asa ratsy satria dia na mbola harivariva aza izy ireo dia sahy manafika amin’ny fomba mampihorohoro izany hoe amin ny alalan ‘ny tifi-danitra mba tsy ahasahian’ny olona mivoaka noho ny tahotra.
Misy andiany maro izy ireo no tonga eo amin’ny toerana ka dia mampihorohoro amin’ny alalan’ ny antso « mivoaha izay mahasy ». Mampametra-panontaniana ny zava miseho toy izao, aiza ho aiza ny fandraisan’ andraikitrin’ny mpitandro filaminana ho fiarovana ny mponina sy ny fananany?
Hita miharihary amin izao ny tsy fijereva akaiky ny zava misy mikasika ity tsy fandriampahaleman’ ny mponina ambanivohitra ity, izay mijaly sy mihorohoro ny vahoaka ary tena miady irery.
Ny sasany amin’ny mponina amin’izao dia tsy mandeha mamonjy ireny toeram-pivavahana ireny noho ny tahotra.
Antenaina ny fandraisan’ny fitondram-panjakana ity asan-jiolahy ity raha misy ihany fihainoana sy fijerena ny trangan-javatra mampihorohoro toy izao.